Posted by တန်ခူး at 1:19 PM
အဲလိုအချစ်ဝတ္ဘုလေးတွေမဖတ်ဖြစ်တော့တာ အသက်ရလာကတည်းကဆိုပါတော့...အဟိ :p
၀တ္ထုလေးက ဆန်းကြယ်တယ်။ တင်ပြပုံလည်းကောင်းတော့ အဆုံးအထိ မျောပါသွားတယ်။
Endinig is amazing!
I think.. Nyi will insult Tharyar.
taw thay tae.
တော်တော် ကောင်းပါ၏ .. :) ခေါင်းစဉ် ရွေးချယ် ပေးတာလဲ မိုက်တယ် :P
ဘာများဖြစ်မလဲ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့.. တော်ရုံလူကတော့ အဲလိုမျိုးကြီး တိုက်ဆိုင်မှုတွေ သိပ်များတာနဲ့ ဂျေဝင်လို့စိတ်တိုနေရမလားမသိနော်.. ဟွန်းဟွန်း
အမ၀တ္တုတိုက ဖတ်လို့ကောင်းတယ်။ ဖတ်ရင်းနဲ့ နောက်ဆုံး ကွဲသွားမလားဆိုပြီး စိတ်တထင့်ထင့်နဲ့ နောက်ဆုံးမှ Happy Ending လေးဖြစ်သွားတော့မှ စိတ်အေးသွားတော့တယ်.. :)
အထင်လွဲပြီး သဝန်တို ပြသနာတွေ ဖြစ်ကြရတော့မယ် မှတ်တာ။ တော်သေးး) ။ ဇတ်လမ်းလေး တစ်ခုလုံး ဆွဲဆောင်မှု ရှိတယ်ဗျာ။ သိပ်ကောင်းတဲ့ ဝတ္ထုတိုလေးပဲ
ဇာတ်သိမ်းလေး လှတယ်... ဇာတ်သိမ်းစကားက အသက်ပဲ .. အဲဒါဖြေပုံ မှားလို့ ကွဲတဲ့ အတွဲ မနည်းဘူး... အမရေ
အလည်ရောက်တယ်။ စာရေးကောင်းတယ်ဗျ။ အတော်များများ ဖတ်သွားတယ်။ C-box မတွေ့လို့ ဒီမှာပဲ ရေးလိုက်တယ်။
အချစ်မှာ ယုံကြည်မှု ဆိုတာ အလွန်တရာ အရေးကြီးကြောင်း...။
ချစ်စဖွယ် ဆွဲဆောင်မှုရှိလှတဲ့ ၀တ္ထုတို ကလေးတစ်ပုဒ်ပါ...။
အဲ့ဒီလို ဝတ္ထုလေးတွေ ရေးပေးပါနော်
ထနောင်းရေ...တန်ခူးလဲ ဒီဝထ္တုလေးရေးဖို့ ၁၅နှစ်လောက်ပြန်ငယ်လိုက်ရတယ်...
ကျေးဇူးပါမြတ်နိုးရေ...အိပ်မက်ဆိုတာ တချိန်မှာ နိုးထရစမြဲပဲလေ...
ကိုစိုးထက်ရေ...နှလုံးသားထဲ အမြဲစွဲငြိစေတဲ့ သီချင်းလေးကို သံယောဇဉ်ကြီးစွာ ခေါင်းစဉ်အဖြစ်ရွေးချယ်မိခဲ့တာပါ...
အိမ့်ရေ...အားပေးတာကျေးဇူးပါ..အချစ်ဆိုတာ မျှဝေပေးလို့ခက်တဲ့အရာဆိုတော့ အပြင်မှာဆိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မှာ အမှန်ပဲနော်...
နုရေ...ကျေးဇူးပါ...Happy Endingလေးမှ သာယာအတွက် တရားမလားလို့ပါ...သူကညီ့ကိုတကယ်ချစ်တာလေ...
ခုလိုလာလည်အားပေးတာကျေးဇူးပါမင်းကျန်စစ်ရေ...နောက်လဲအမြဲလာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်...နားလည်မှုတွေက သဝန်တိုတာထက် အချစ်တွေခိုင်မြဲစေမယ့်ကြိုးတွေမိုလား...
ကျေးဇူးပါလှိုင်ရေ...ဟုတ်တယ်နော်...ဖြေပုံမှားရာက မာနစစ်ပွဲတွေနဲ့ ဇာတ်သိမ်းရတဲ့ဘဝတွေ တို့လဲတွေ့ဖူးတယ်...
အမြဲအားပေးမယ်ဆိုလို့ဝမ်းသာပါတယ်မယ်မဒီရေ...ကျွန်မကလဲ အချစ်ဝထ္တုရေးရတာ လက်တွေ့သူမို့အားပေးမယ့်သူတွေရှိရင် ရေးဦးမှာပါ...
ဟေး အကြင်နာအိပ်မက်လေးကို ခုမှဖတ်ရတယ်,,, အချစ် အချစ်...အကြင်နာအိပ်မက်ထဲကအချစ် ,,,
နှင်းပန်းရေ…ဘာလို့ အချစ်အချစ်လို့၃ ခါတိတိ ဆိုနေတာလဲဟင်…